ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် https://online-videos-downloader.com/ တွင်တည်ရှိသော အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ဤဝဘ်ဆိုဒ် (online-videos-downloader.com) ကိုဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သင်လက်ခံသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို လက်ခံရန်သဘောမတူပါက အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ကို ဆက်လက်အသုံးမပြုပါနှင့်။
အောက်ပါဝေါဟာရသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ၊ သီးခြားရပ်တည်ချက်ဖော်ပြချက်နှင့်ငြင်းဆိုမှုအသိပေးချက်နှင့်သဘောတူညီမှုအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ “ လိုင်း”၊ “ သင်” နှင့်“ သင်၏” သည်သင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ င် ရောက်၍ ကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာသည်။ “ ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ ငါတို့”၊ “ ငါတို့” နှင့်“ ငါတို့” ဟူသောစကားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုရည်ညွှန်းသည်။ “ ပါတီ”၊ “ ပါတီများ” (သို့)“ ကျွန်ုပ်တို့” သည် ၀ ယ်သူရောမိမိကိုယ်ကိုပါရည်ညွှန်းသည်။ စည်းကမ်းချက်များအားလုံးသည်ကုမ္ပဏီ၏ဖော်ပြထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုမ္ပဏီ၏ဖော်ပြထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားကူညီရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံခြင်း၊ နှင့်နယ်သာလန်၏တည်ဆဲဥပဒေကိုဘာသာရပ်။ အထက်ပါဝေါဟာရများ (သို့) အခြားဝေါဟာရများကိုမည်သည့်အသုံးအနှုန်းမှမဆိုအသုံးပြုခြင်း၊ အများကိန်း၊ အရင်းအနှီးထုတ်ပေးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူတို့၌ဖြစ်စေ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးအသုံးပြုမှုကို အသုံးချသည်။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် online-videos-downloader.com ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒနှင့် သဘောတူညီချက်အရ ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုရန် သဘောတူခဲ့သည်။
အများစုကအပြန်အလှန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအလည်အပတ်များအတွက်အသုံးပြုသူရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူကြကုန်အံ့ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ။ ကွတ်ကီးလွယ်ကူလူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါအချို့ဒေသများ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate / ကြော်ငြာမိတ်ဖက်အချို့သည်လည်းကွတ်ကီးများကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
အခြားနည်းဖြင့် မဖော်ပြထားပါက၊ အွန်လိုင်း-videos-downloader.com နှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်း၏လိုင်စင်များသည် Online video downloader ရှိ အကြောင်းအရာအားလုံးအတွက် ဉာဏမူပိုင်ခွင့်များကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အားလုံးကို လက်ဝယ်ရှိသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော သင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် အွန်လိုင်း အခမဲ့ ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်ကိရိယာမှ ၎င်းကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူမှ အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေပါ။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူထံမှ ရောင်းချ၊ ငှားရန် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ခွဲပစ္စည်းများ
Online video downloader မှ အကြောင်းအရာကို ပြန်ထုတ်ခြင်း၊ ပွားခြင်း သို့မဟုတ် ကော်ပီလုပ်ပါ။
Online video downloader မှ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပါ။
ဤသဘောတူညီ hereof ရက်စွဲပေါ်တွင်စတင်ရလိမ့်မည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့သည် ဝဘ်ဆိုက်၏ အချို့သောနေရာများတွင် ထင်မြင်ချက်များနှင့် အချက်အလက်များကို ပို့စ်တင်ရန်နှင့် ဖလှယ်ရန် အသုံးပြုသူများအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးပါသည်။ online-videos-downloader.com သည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ မရောက်ရှိမီ မှတ်ချက်များကို စစ်ထုတ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မပြုပါ။ မှတ်ချက်များသည် အွန်လိုင်း-videos-downloader.com၊ ၎င်း၏အေးဂျင့်များနှင့်/သို့မဟုတ် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများ၏ အမြင်များနှင့် ထင်မြင်ချက်များကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။ မှတ်ချက်များသည် ပို့စ်တင်သူ၏ အမြင်နှင့် ထင်မြင်ချက်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။ တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိ၊ အွန်လိုင်း-videos-downloader.com သည် မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ပို့စ်တင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နှင့်/သို့မဟုတ် မည်သည့်တာဝန်ယူမှု၊ ပျက်စီးမှုများ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် တာ၀န်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ဤဝဘ်ဆိုဒ်ရှိ မှတ်ချက်များ ၏ အသွင်အပြင်။
online-videos-downloader.com သည် မှတ်ချက်များအားလုံးကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည့် မည်သည့်မှတ်ချက်များကိုမဆို ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website အပေါ်ထင်မြင်ချက်များ post များနှင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အားလုံးလိုအပ်သောလိုင်စင်နှင့်သဘောတူညီချက်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ရှိသည်,
အဆိုပါမှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာအသေရေဖျက်, သရေဖျက်မှု, ထိုးစစ်, မစင်ကြယ်သောသို့မဟုတ် privacy ကိုတစ်ခုကျူးကျော်ဖြစ်သောမဟုတ်ရင်ဥပဒေမဲ့ပစ္စည်းဆံ့မခံပါဘူး
ဤဥပဒေဖြင့် သင်သည် အွန်လိုင်း-videos-downloader.com ကို အသုံးပြုရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်နှင့် အခြားသူများကို အသုံးပြုရန်၊ သင့်မှတ်ချက်များကို ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ဖော်မတ်များ သို့မဟုတ် မီဒီယာများတွင် အသုံးပြုရန်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် တည်းဖြတ်ရန် သီးသန့်လိုင်စင်မဟုတ်သော အွန်လိုင်း-videos-videos-downloader.com ကို ပေးထားပါသည်။
သူတို့ကတခြားစာရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ Website များမှ hyperlinks အဖြစ်အွန်လိုင်း directory ကိုဖြန့်ဖြူးအတူတူထုံးစံ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လင့်ထားသည်မည် နှင့်
System ကိုကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web site ကိုမှ hyperlinks မပြုစေခြင်းငှါအရာ non-profit အဖွဲ့အစည်းများ, မေတ္တာကုန်တိုက်ကြီးတွေနှင့်ပရဟိတရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုတောင်းခံခြင်း မှလွဲ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသိအမှတ်ပြု။
ဤအဖွဲ့များမြေားကိုမှဒါမှမဟုတ် link ကိုသကဲ့သို့ရှည်လျားသည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်, ငါတို့အိမ်မှာစာမကျြနှာသို့လင့်ထားသည်ဖြစ်နိုင်သည်: (က) လှညျ့စားမဆိုလမ်းထဲမှာမရှိ၏ (ခ) မဟုတ်မမှန်အဆိုပါချိတ်ဆက်ပါတီနှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစပွန်ဆာ, ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ဆိုလိုပါဘူး, နှင့် (ဂ) ချိတ်ဆက်ပါတီရဲ့ site ၏ဆက်စပ်အတွင်းကိုက်ညီ။
ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းများသည်အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုအခြား link ကိုတောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းငှါ:
လေ့-လူသိများစားသုံးသူနှင့် / သို့မဟုတ်စီးပွားရေးအချက်အလက်ရင်းမြစ်များ,
အွန်လိုင်း directory ကိုဖြန့်ဖြူး;
စာရင်းကိုင်, ဥပဒေနှင့်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ; နှင့်
ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ပါက ဤအဖွဲ့အစည်းများထံမှ လင့်ခ်တောင်းဆိုမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပါမည်- (က) လင့်ခ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင်မပြေဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ (ခ) အဖွဲ့အစည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အပျက်သဘောဆောင်သော မှတ်တမ်းများ မရှိပါ။ (ဂ) ဟိုက်ပါလင့်ခ်ကို မြင်နိုင်မှုမှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကျိုးကျေးဇူးသည် online-videos-downloader.com မရှိခြင်းကို လျော်ကြေးပေးသည်။ နှင့် (ဃ) လင့်ခ်သည် ယေဘူယျ အရင်းအမြစ် သတင်းအချက်အလက်၏ ဆက်စပ်မှုတွင် ရှိနေသည်။
ဤအဖွဲ့များက link အဖြစ်ဤမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာသို့လင့်ထားသည်ဖြစ်နိုင်သည်: (က) လှညျ့စားမဆိုလမ်းထဲမှာမရှိ၏ (ခ) မဟုတ်မမှန်အဆိုပါချိတ်ဆက်ပါတီနှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစပွန်ဆာ, ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ဆိုလိုပါဘူး, နှင့် (ဂ) ချိတ်ဆက်ပါတီရဲ့ site ၏ဆက်စပ်အတွင်းကိုက်ညီ။
အကယ်၍ သင်သည် အထက်အပိုဒ်2တွင်ဖော်ပြထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လင့်ခ်ချိတ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက၊ online-videos-downloader.com သို့ အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးရပါမည်။ သင့်အမည်၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အပြင် သင့်ဆိုက်၏ URL၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ သင်ချိတ်ဆက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် မည်သည့် URL များစာရင်းနှင့် သင်အလိုရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ရှိ URL များစာရင်းကို ထည့်သွင်းပါ လင့်ခ် တုံ့ပြန်မှုအတွက် 2-3 ပတ်စောင့်ပါ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Approved အဖွဲ့အစည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ hyperlinks ဖြစ်နိုင်သည်:
ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် Uniform Resource Locator ၏အသုံးပြုမှုကိုသဖြင့်, သို့မဟုတ်
သောချိတ်ဆက်ပါတီရဲ့ site ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာဆက်စပ်နှင့်ပုံစံအတွင်းသဘာဝကျပါတယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြားမည်သည့်ဖော်ပြချက်များအသုံးပြုမှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
အွန်လိုင်း-videos-downloader.com ၏လိုဂို သို့မဟုတ် အခြားအနုပညာလက်ရာကို အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ, သင်သည်မည်သည့်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အမြင်အာရုံတင်ဆက်မှုသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲသောငါတို့ Webpage န်းကျင် frames များကိုဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မဆို content များအတွက်တာဝန်ရှိကိုင်မရကြလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မြင့်တက်ကြောင်းအားလုံးတောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ခုခံကာကွယ်ဖို့သဘောတူသည်။ အဘယ်သူမျှမ link ကို (s) ကိုမဟုတ်ရင်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီအခွင့်အရေးများ၏ချိုးဖောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားချိုးဖောက်မှုပေးဆောင်ရွက်ပြီး, သရေဖျက်မှုညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူစေခြင်းငှါမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာ, ဒါမှမဟုတ်အားထိပါးရာသငျ့သညျ။
ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်လင့်များသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမဆိုအထူးသဖြင့်လင့်ခ်ကိုဖယ်ရှားတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သငျသညျခကျြခငျြးတောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးကိုလင့်များဖယ်ရှားပစ်ရန်အတည်ပြု။ ကျနော်တို့အာမကဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုခွင့်ကိုလည်းကြိုတင်ယူထားကြောင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမူဝါဒကချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံကိုသင်ခညျြနှောငျနှငျ့ဤချိတ်ဆက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာခံရဖို့သဘောတူသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကနေလင့်ခ်များဖယ်ရှားရေး
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ထိုးစစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မည်သည့် link ကိုသင်ရှာလျှင်သင်ဆက်သွယ်ပါနဲ့ငါတို့အားတစုံတခုသောအခိုက်အကြောင်းကြားရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လင့်များဖယ်ရှားပစ်ရန်တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပေးရနျတာဝနျရှိသို့မဟုတ်ဒီတော့သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်သင်သည်တုံ့ပြန်ရန်ကြသည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့က၎င်း၏ပြည့်စုံသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုခိုင်လုံပါဘူး, ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ကြောင်းကိုသေချာမထင်သော်လည်း, မဟုတ်သလိုကျနော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရရှိနိုင်ဖြစ်နေဆဲပါသို့မဟုတ် website တွင်ပစ္စည်းရက်စွဲအထိထားရှိမည်ကြောင်းသေချာစေရန်ကတိပေးကြဘူး။
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကခွင့်ပြုသောအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိ, ငါတို့က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဤ website ၏အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးကိုယ်စား, အာမခံနှင့်အခြေအနေများကိုဖယ်ထုတ်။ ဒီမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အလိုတော်အတွက်ဘယ်အရာကမှ:
သက်ဆိုင်ဥပဒေအရခွင့်မပြုကြောင်းမည်သည့်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သို့မဟုတ်သင့် liabilities မဆိုကန့်သတ်ရန်; သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလုသောငါတို့သို့မဟုတ်သင့် liabilities မဆိုဖယ်ထုတ်။
တာဝန်ယူမှုအစု၏ကန့်သတ်မှုနှင့်တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဒီပုဒ်မနှင့်တခြားနေရာကဒီမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်များတွင်: (က) ရှေ့အပိုဒ်မှဘာသာရပ် ဖြစ်. , နှင့် (ခ) တရားမျှတမှုမရှိခြင်းနှင့်ပြဌာန်းတာဝန်ချိုးဖောက်ဘို့, စာချုပ်ထဲမှာပေါ်ပေါက် liabilities အပါအဝင်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အောက်မှာပေါ်ပေါက်အားလုံး liabilities, အုပ်ချုပ်။